हस्तमैथुन केटाले बढि गर्छन कि केटीले ? « aamsanchar.com , aamsanchar
अत्यधिक हस्तमैथुन गर्दा महिलामा केही नकरात्मक असर पर्न सक्छ । यसबाट उनीहरुको वैवाहिक जीवनमा नकारात्मक हुन् सक्छ । किनभने हस्तमैथुनको लतमा फसेका महिलाले विहेपछि पनि पतिसँगको यौन सम्बन्ध रुचि राख्दैनन् । यो कुरा पुरुषको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । यसबाट छटपटी बढ्नुका साथै तनाव र चिडचिडाहट पनि बढ्छ । यसले महिनावारीमा गडबढी देखिन पनि सक्छ ।
यौन सम्बन्धी केहि भ्रमहरु
मिस ग्रेस टिन झापाको उपाधि बबितालाई
बच्चा जन्मेको कति समय पछि सम्भोग गर्न सकिन्छ ?
मकालु गाउँपालिकालागि सेनाको हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री ढुवानी
मिस टिन प्रदेश १ को बन्दशत्र प्रशिक्षण
कुकुरको पेटमा रहेको २ केजीको ट्युमर शल्यक्रिया गरि निकालियो